१२ असोज, काठमाडौं । चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आज संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभालाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ । राष्ट्रसंघ महासभाको आजको विहानी सत्रमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष...
११ असोज, काठमाडौं । संविधानसभा निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सरकारले ४५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरेपछि यसमा युवामात्रै होइन, ४३ वर्ष पुगेका प्रौढसमेत...
११ असोज, काठमाडौं । प्रमुख दलहरुलाई उछिन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले प्रत्यक्षतर्फका १ सय ९६ जना उमेद्वारको नाम सार्वजनिक गरेको छ । बाँकी नाम...
Vorschläge zu Erstaunen Dein Ausgehen
” Wirklich Er liebt mich selbst?” – 10 Garantiert Anzeichen Der Kerl Tut (Und Nicht)
यस्तो थियो दरबार हत्याकाण्डपछिको दृश्य
१२ असोज, काठमाडौं । के तपाईं दसैंबिदाको फुर्सद किताब पढेर बिताउने तयारीमा हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने पुस्तक छान्नका लागि साझा प्रकाशनले काठमाडौंको सभागृह...
पत्रपत्रिकामा व्यापक हल्ला भयो । रेडियो, एफ्. एम्.का लागि गहकिलो विषय बन्यो । सानो उमेरमा कमाएको उसको प्रतिष्ठा खाक भयो, अड्कल काटे विज्ञहरूले ।...
१२ असोज, काठमाडौं । शनिबार सरकारी विदाको दिन एकाबिहानै सेतो प्लेटको सरकारी मोटरसाइकल लिएर घुम्न निस्किएका एक युवा पुरानो बानेश्वरमा ट्राफिक प्रहरीको फन्दामा परे...
११ असोज, काठमाडौं । नेकपा माओवादीले ७० वर्षीय वृद्ध विदेशीलाई कारवाही गर्ने हो भने सैभन्दा पहिले अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर र भारतीय विदेश...
१२ असोज, काठमाण्डौं । नेपाल टेलिकमको मोवाइल सेवा अवरुद्ध भएको छ । गएराति देखि अवरुद्ध सेवा अझै सुचारु हुन सकेको छैन् । प्राविधिक कारणले...
११ असोज, काठमाडौं । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा आवद्ध प्रमुख तीन दल र आन्दोलनरत ३३ दलका नेतावीच शुक्रबार अकस्मात वार्ता भएको छ । ललितपुरमा सम्पन्न...
११ असोज, नेपालगन्ज । 'चिना हराएको मान्छे'का लेखक तथा चर्चित हास्य कलाकार हरिवंश आचार्य हराएको चिना खोज्दै नेपालगन्ज पुग्नुभएको छ । हास्यव्यंग्य, गायन र...
विदेश गएर आम्दानी मात्र हुन्छ भनेर मैले सोचेको छैन । म कुनै पनि देशमा पुगेर आफ्नो स्टारडम देखाउदिन । म कुनै पनि देशमा पुगेर त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको जीवन जीउने शैलीलाई पछ्याउँछु । कत्ति पटक त मैले नेपालीहरु बसेको स्थानमा नै पुगेर उहाँहरुसँग कुरा पनि गरेको छु ।...
विश्वको एक नम्बरको सोसल साइट फेसबुकमाथि लगाउँदै आएको बन्देजलाई चीनले केही हदसम्म खुकुलो बनाएको छ । यो हप्तादेखि चीनले देशका केही क्षेत्रमा फेसबुक, टि्वटर तथा अन्य राजनीतिक रुपमा संवेदनशील समाचार साइटहरु खुल्ला गरेपछि फेसबुकले चीनमा पुनः प्रवेश पाएको हो । सन् २००९ को दंगापछि चीनमा फेसबुक तथा टि्वटरको प्रयोगमा
विश्वमा वायु प्रदुषणका कारण वर्षेनी २१ लाख मानिसको ज्यान जाने गरेको एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । प्रदुषित वायुका...
सुरुमा बिरालोको पञ्जा, त्यसपछि खुट्टाको बुढि औँला । एप्पलको नयाँ आइफोन ५ एस को निकै सुरक्षित भनिएको औँठाछापे प्रविधि...
अन्तरिक्षमा जम्मा भएको ठूलो परिमाणको फोहर पछिल्लो दिनमा चुनौतिको विषय बन्दै गएको छ । विभिन्न राष्ट्रले अन्तरीक्षमा पठाएका यान...
म हिंडेको भन्दा अलिक परको बाटोमा बीस-तीस जना मान्छेहरु लास लिएर ओरालो लागेको देखियो । कुहिरा भित्र हराउँदै चिहाउदै...
नेपालमा केही समय अघिदेखि आदिवासी जनजातिका वारेमा पुनः बहस उठेको छ । खास गरेर नेपालमा रहेका बाहुन, क्षेत्री र...
तस्वीरमा खन्चुवा जीवन (फोटोफिचर सहित)
११ असोज, काठमाडौं । नेपालको मुख्य दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले विकास आयोजना सञ्चालनमा गुणस्तर वृद्धि गर्न नसके नेपाललाई दिने सहयोग रकम घटाउने जनाएको छ । वाषिर्क सहयोग रकममा ९ करोड डलरभन्दा बढी अर्थात ९ अर्ब रुपैयाँसम्म कम हुने एडिबीले चेतावनी दिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०६९/०७० को मूल्यांकनबाट नेपालले ५ मा ...
११ असोज, काठमाडौं । ‘जलस्रोत र पर्यटन हाम्रो साझा भविष्यको संरक्षण’ भन्ने मुल नारासहित संसारभर २७औं विश्व पर्यटन दिवस मनाइएको छ । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गरि जलस्रोतको
११ असोज, वीरगञ्ज । लगानी आकर्षण गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले बाराको डुमरवानामा निर्माण गर्ने भनिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा नआउँदा यस क्षेत्रको औद्योगिक
नेपाली बजारमा तीन लाखको रक्सी
११ असोज, काठमाण्डौं । नेपाली बजारमा सम्भवतः हालसम्मकै सबैभन्दा महँगो मूल्यको मदिरा भित्रिएको छ । बेलायती कम्पनी चिभाज ब्रदर्सले उत्पादन गरेको ‘रोयल स्यालुट-६२ स्यालुट’ ब्रान्डको महँगो हि्वस्की भित्रिएको हो...
चर्चित नेपाली नायिका तथा मोडलहरु धरानको र्‍याम्पमा उत्रिएका छन् । शुक्रबार बि्रटिस कम्युनिटी हलमा आयोजना भएको ट्रेन्डसेटर्स फेशन शोमा नायिकाहरु निशा अधिकारी, ऋचा शर्मा,...
गोपाल दाहाल धराने गायक एपि शेर्पाको एकल गायन कार्यक्रम एपि शेर्पा लाईभ इन धरान भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । हालै दिवंगत वरिष्ठ गायक...
एउटा घटनाले अहिले पनि मलाई पिरोल्छ । म चोभारमा सिनेमाको सुटिङमा व्यस्त थिएँ । मलाई भोलिपल्ट फोटोसुट गरेर पर्सीपल्ट धरान जानु थियो । त्यसैले...
मेरो बुबाले नेपाली सिनेक्षेत्रमा राखेको नामलाई अझै उचाईंमा पुर्‍याउन म यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुँ । म मेरो क्षमता देखाउँदै राम्रो छवि बनाएर सिने...
कलर्स च्यानलबाट प्रशारण हुँदै आएको चर्चित रियालिटी शो ‘कमेडी नाइट्स विथ कपिल’ छायांकन हुने सेट जलेपछि यसले चर्चा पायो । शोका होस्ट कपिल शर्मा...
आफ्नो नयाँ चलचित्र ‘ह्याप्पी न्यू ईयर’को पहिलो छायांकन सेड्यूल सकेर दुबइबाट फर्के लगतै बलिउड बादशाह साहरुख खान विभिन्न पार्टी समारोहमा सहभागी भैरहेका छन् ।...
१२ असोज, काठमाडौं । के तपाईं दसैंबिदाको फुर्सद किताब पढेर बिताउने तयारीमा हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने पुस्तक छान्नका...
पत्रपत्रिकामा व्यापक हल्ला भयो । रेडियो, एफ्. एम्.का लागि गहकिलो विषय बन्यो । सानो उमेरमा कमाएको उसको प्रतिष्ठा खाक...
न्युयोर्क । गैर आवासीय नेपाली संघको छैठौँ सम्मेलन तयारीको साथ अगाडी बढी रहेको छ । गैर आविसय नेपाली संघ-अन्तर्राष्ट्रिय समितिको बिश्व सम्मेलनमा नयाँ नेतृत्वको चयन हुने छ । यही क्रममा विश्वका बिभिन्न मुलुकबाट उम्मेदवारी दिने क्रम जारी छ ।...
११ असोज, काठमाडौं । राजधानीमा जारी एएफसी यू-१६ छनोट फुटबलमा नेपालले इराकविरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै बराबरी खेलेको छ । पहिलो हापमा...
११ असोज, काठमाडौं । नेपाल प्रहरी क्लबका शिरीष गुरुङले तेश्रो एनएसए नेपाल आइस पौडी प्रतियोगिताको खुलातर्फ पुरुष २ सय मिटर व्यक्तिगत मिड्लेमा शुक्रबार नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरेका छन्
विश्वकी सबैभन्दा अग्ली मोडेलको रुपमा किर्तिमान बनाएकी अमेरिकाकी अमेजन इभले जोडी भेटाएकी छिन् । क्यालिफोर्नियाकी बासिन्दा ३४ वर्षकी इभले जोडी त फेला पारिन्, तर...
च्याउ कति सम्म ठूलो होला ? के तपाइँले तिन किलो सम्मको च्याउ हुन्छ भन्ने कुरा पत्याउनुहुन्छ ? कहाँबाट पत्ताउनु ? एउटा च्याउ १-२ सय...
दुइ टाउका भएकी बालिकाको दुर्लभ शल्यक्रिया
जन्मिँदै दुइवटा टाउका भएकी एक अफगानिस्तानी बालिकाको सफल शल्यक्रिया भएको छ । डाक्टरहरुले निकै जटिल मानिएको उक्त शल्यक्रिया सफलतापूर्वक...
एड्सबाट मर्नेको संख्यामा ‘नाटकीय’ कमी
भिटामिन बी ले कम गर्छ हृदयाघातको खतरा
SEPT 27, KATHMANDU. Three tourists who came to Nepal this morning were honoured at the Tribhuvan International Airport today...
SEPT 27, KATHMANDU. Nepal has become the full member of the International Standards Organisation (ISO). Finance Minister Shankar Prasad...
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा र इरानी राष्ट्रपति हसन रौहानीवीच टेलिफोन वार्ता भएको छ । राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क...
चीनमा सेनाका प्रमुख जनरलको छोरालाई १० वर्ष जेल सजाय
दुई लाख नेपाली युवा लागुऔषध प्रयोगकर्ता, डेढ लाखले छाड्नै नसक्ने